Fitondrana repoblikanina misy lalàna sy rafitra | NewsMada
Fitondrana repoblikanina misy lalàna sy rafitra
Par Taratra sur 21/07/2021
Fifanakalozan-kevitra indray izao no ketrehina sy takin’ny mpanohitra? Tsy zava-baovao fa efa fahazaran-dratsy, tarazo. Nefa na ny samy mpanohitra aza, tsy mifankahazo an-toerana be ihany: tsy mahay sy mahavita na mihevitra akory izay hifanakalo hevitra. Efa za-dratsy manohitra ny sasany, ka toherina avokoa izay azo mitranga.
Izany rehetra izany, tsy inona fa kajikajy sy paipaika amin’izay hifampizarana andraikitra na seza fotsiny ihany: ady tombontsoa manokana hialokalofana amin’ny hoe fiaraha-mamaha olana, fiaraha-mandamina ny toe-draharaha amin’izay mahametimety ny tena iniana korontanina lava, fiaraha-mitantana amina tetezamita…
Izay mandrakariva ve no ndeha hatao sy hiainana eto amin’ny tany sy ny fanjakana amin’izay heverina ho olana? Eny, na izay olana amin’ny tena na ny sasany manokana: fahaverezana na tsy fahazoana tombontsoa manokana, ohatra. Mahavery rariny ny vahoaka tsy mahita rirany amin’izay fampandrosoana noho ny adilahy politika lava.
Mbola ilaina ve, ohatra, ny fifidianana, raha izany hatrany no atao ho lala-masaka amin’ny fitadiavam-bahaolana amin’itsy sy iroa? Nefa ny mpitondra no efa nampindraman’ny maro anisa amin’ny vahoaka fahefam-panjakana tamin’ny alalan’ny latsa-bato: hanatanteraka ny fanamby nifidianana azy, hamaha ny olan’ny vahoaka…
Eny, na ny lalàmpanorenana aza, ohatra, tsy ilaina, raha fifanakalozan-kevitra ho amin’ny fizarana toerana amin’ny fiaraha-mitantana lava no atao eto. Nefa efa voafaritra amin’izany, ohatra, ny amin’ny fe-potoam-piasan’ny mpitondra, ny rafitra na andrimpanjakana iadian-kevitra amin’izay tsy mety ataon’ny fahefana mpanatanteraka.
Ny mampanontany tena amin’izany rehetra izany, sao tsy zakan’ny mpanao politika tsy sahy miatrika fifidianana ny fitondrana repoblikanina? Ao anatin’izany ny lalàna, ny rafitra, ny dingana sy fomba amin’izany… Politikan’ny mpitavandra toerana mora foana tsinona no iadiana sy tadiavina lava eto? Na ifandavoana sy ifandovana…